၂၃-၀၆-၂၀၂၁ ဓါတ်ပုံ - ဆုံခလာပြည်နယ်ထဲက စက်ရုံအလုပ်သမားများ ကိုဗစ်စောင့်ကြည့်ရေးစင်တာသွားဖို့ စောင့်နေကြပုံ (ဆုံခလာပြည်နယ်မြေကျန်းမာရေး)
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ ဆုန်ခလာပြည်နယ်ထဲက မြန်မာနိုင်ငံသား အလုပ်သမားအများစု အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ငါးသေတ္တာစက်ရုံမှာ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့အထိ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာ ၄၀၀ ကျော် တွေ့ ရှိခဲ့ရပါတယ်။ စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၁,၀၀၀ ကျော်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ဆုန်ခလာပြည်နယ်၊ မြို့နယ် ၁၆ မြို့နယ်ထဲက စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် မအေးအေးမာက သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံ ဆုန်ခလာပြည်နယ်ထဲမှာ မြန်မာအလုပ်သမား အများအပြား အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ငါးသေတ္တာစက်ရုံမှာ ဇွန် ၂၂ ရက်နဲ့ ၂၃ ရက် ကိုဗစ်စစ်ဆေးတာမှာ အလုပ်သမား ၄၀၀ နီးပါး ကိုဗစ်ရောဂါ ကူးစက်နေတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတည်ပြုလူနာ အများစုက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်လို့ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအခွင့်အရေး ကွန်ရက်ရဲ့ ဟတ်ရိုင်မြို့တာဝန်ခံ ဦးဘရီက အခုလို ပြောပါတယ်။
"၃၉၁ ယောက်ဖြစ်သွားပြီး တရက်ထက်တရက် တိုးလာနေတယ်။ ရောဂါကူးစက်တဲ့သူတွေက ထိုင်းယူနီယံအုပ်စုက ဆုံခလာမှာစက်ရုံ ၂ ရုံရှိတယ်။ ငါးသေတ္တာစက်ရုံရယ် ပုဇွန်စက်ရုံရယ်ရှိတယ်။ လက်ရှိမှာကျနော်တို့ဘက်မှာအတော်ဆိုးဝါးနေတယ်။ တချို့ ဆေးရုံမှာလည်း ကုတင်မလုံလောက်လို့ ကုတင်တွေအားလပ်မှသာ ဆေးရုံတွေခေါ်ရတဲ့ဟာဖြစ်နေတယ်။"
ကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်တယ်လို့ အတည်ပြုသူတွေကို စောင့်ကြည့်စင်တာတွေကို ပို့ဆောင်ထားပါတယ်။ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့အတွက် အတည်ပြုလူနာ ၂၄၀ ထက် မနည်းရှိပြီး စုစုပေါင်းကူးစက်သူ ၁ ထောင်ကျော်ရှိတဲ့ ဆုံခလာပြည်နယ်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မြို့နယ် ၁၆ ခုကစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံတွေ၊ စာသင်ကျောင်းတွေကိုလည်း ပိတ်ထားပါတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ဆုန်ခလာ ပြည်နယ် ကပ်ရောဂါထိမ်းချုပ်ရေးအဖွဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်နေတာနဲ့ပါတ်သက်လို့ ထိုင်းဘာသာနဲ့ အခုလိုပြောသွားပါတယ်။
သူ ပြောသွားတာကတော့ ခုချိန်မှာ ကိုဗစ်လူနာတွေကို သုံးသုတ်ခွဲထားပါတယ်။ နံပါတ်(၁) မြန်မာအလုပ်သမားအုပ်စု မြန်မာနိုင်ငံသား ၁၁၀၀ ကျော်ရှိနေပါတယ်။အဲဒီထဲကပိုးတွေလူနာ (၆၀) ကျော်ကို ဆေးကုသပေးနေပါတယ်။ (၂) အုပ်စု က ထိုင်းနိုင်ငံသားအလုပ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်(၃) အုပ်စုကတော့ အလုပ်သမား မိသားစုဝင်တွေ ဖြစ်လို့ သူတို့ကိုခွဲပြီး နေရာအသီးသီးပို့ဆောင်ပေးနေပါတယ်။. မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံး တစုတည်း ထားထားပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်။ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာတော့ ထိုင်းတနိုင်ငံလုံးမှာ ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာသစ် လေး ထောင့် တ ရာ ကျော်ရှိနေတယ်လို့ ထိုင်းကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ စုစုပေါင်း ကိုဗစ်အတည်ပြုလူနာက ၂ သိန်း ၃ သောင်း ၂ ထောင်ကျော်ရှိပြီး သေဆုံးလူနာ စုစုပေါင်း ၁၇၇၅ ဦးထက်မနည်း ရှိနေပါတယ်။
ထိုငျးတောငျပိုငျး ငါးသတ်ေတာစကျရုံ အလုပျသမား ၄၀၀ ကြျော ကိုဗဈကူး
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး၊ ဆုနျခလာပွညျနယျထဲက မွနျမာနိုငျငံသား အလုပျသမားအမြားစု အလုပျလုပျနတေဲ့ ငါးသတ်ေတာစကျရုံမှာ ဇှနျလ ၂၄ ရကျနအေ့ထိ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာ ၄၀၀ ကြျော တှေ့ ရှိခဲ့ရပါတယျ။ စုစုပေါငျး အတညျပွုလူနာ ၁,၀၀၀ ကြျောရှိနပွေီဖွဈတဲ့ ဆုနျခလာပွညျနယျ၊ မွို့နယျ ၁၆ မွို့နယျထဲက စကျရုံ၊ အလုပျရုံတှေ၊ စာသငျကြောငျးတှကေိုလညျး ပိတျထားပါတယျ။ ဒီအခွအေနကေို ထိုငျးအခွစေိုကျသတငျးထောကျ မအေးအေးမာက သတငျးပေးပို့ထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံ ဆုနျခလာပွညျနယျထဲမှာ မွနျမာအလုပျသမား အမြားအပွား အလုပျလုပျနကွေတဲ့ ငါးသတ်ေတာစကျရုံမှာ ဇှနျ ၂၂ ရကျနဲ့ ၂၃ ရကျ ကိုဗဈစဈဆေးတာမှာ အလုပျသမား ၄၀၀ နီးပါး ကိုဗဈရောဂါ ကူးစကျနတော တှေ့ရှိခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီအတညျပွုလူနာ အမြားစုက မွနျမာနိုငျငံသားတှဖွေဈတယျလို့ ရှပွေ့ောငျးအလုပျသမားအခှငျ့အရေး ကှနျရကျရဲ့ ဟတျရိုငျမွို့တာဝနျခံ ဦးဘရီက အခုလို ပွောပါတယျ။
"၃၉၁ ယောကျဖွဈသှားပွီး တရကျထကျတရကျ တိုးလာနတေယျ။ ရောဂါကူးစကျတဲ့သူတှကေ ထိုငျးယူနီယံအုပျစုက ဆုံခလာမှာစကျရုံ ၂ ရုံရှိတယျ။ ငါးသတ်ေတာစကျရုံရယျ ပုဇှနျစကျရုံရယျရှိတယျ။ လကျရှိမှာကနြျောတို့ဘကျမှာအတျောဆိုးဝါးနတေယျ။ တခြို့ ဆေးရုံမှာလညျး ကုတငျမလုံလောကျလို့ ကုတငျတှအေားလပျမှသာ ဆေးရုံတှခေျေါရတဲ့ဟာဖွဈနတေယျ။"
ကိုဗဈရောဂါကူးစကျတယျလို့ အတညျပွုသူတှကေို စောငျ့ကွညျ့စငျတာတှကေို ပို့ဆောငျထားပါတယျ။ ဇှနျလ ၂၄ ရကျနအေ့တှကျ အတညျပွုလူနာ ၂၄၀ ထကျ မနညျးရှိပွီး စုစုပေါငျးကူးစကျသူ ၁ ထောငျကြျောရှိတဲ့ ဆုံခလာပွညျနယျထဲမှာ ရှိတဲ့ မွို့နယျ ၁၆ ခုကစကျရုံ၊ အလုပျရုံတှေ၊ စာသငျကြောငျးတှကေိုလညျး ပိတျထားပါတယျ။
ထိုငျးနိုငျငံတောငျပိုငျး ဆုနျခလာ ပွညျနယျ ကပျရောဂါထိမျးခြုပျရေးအဖှဲ့ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူက ကိုဗဈထိနျးခြုပျရေးလုပျနတောနဲ့ပါတျသကျလို့ ထိုငျးဘာသာနဲ့ အခုလိုပွောသှားပါတယျ။
သူ ပွောသှားတာကတော့ ခုခြိနျမှာ ကိုဗဈလူနာတှကေို သုံးသုတျခှဲထားပါတယျ။ နံပါတျ(၁) မွနျမာအလုပျသမားအုပျစု မွနျမာနိုငျငံသား ၁၁၀၀ ကြျောရှိနပေါတယျ။အဲဒီထဲကပိုးတှလေူနာ (၆၀) ကြျောကို ဆေးကုသပေးနပေါတယျ။ (၂) အုပျစု က ထိုငျးနိုငျငံသားအလုပျသမားတှဖွေဈပါတယျ(၃) အုပျစုကတော့ အလုပျသမား မိသားစုဝငျတှေ ဖွဈလို့ သူတို့ကိုခှဲပွီး နရောအသီးသီးပို့ဆောငျပေးနပေါတယျ။. မွနျမာနိုငျငံသားတှအေားလုံး တစုတညျး ထားထားပါတယျလို့ပွောသှားပါတယျ။ ဒီနေ့ ဇှနျလ ၂၄ ရကျနမှေ့ာတော့ ထိုငျးတနိုငျငံလုံးမှာ ကိုဗဈအတညျပွုလူနာသဈ လေး ထောငျ့ တ ရာ ကြျောရှိနတေယျလို့ ထိုငျးကနျြးမာရေးဌာနက ထုတျပွနျထားပါတယျ။ စုစုပေါငျး ကိုဗဈအတညျပွုလူနာက ၂ သိနျး ၃ သောငျး ၂ ထောငျကြျောရှိပွီး သဆေုံးလူနာ စုစုပေါငျး ၁၇၇၅ ဦးထကျမနညျး ရှိနပေါတယျ။